FALANQEYN: Shirkii Dhuusamareeb ma rajo wacan ayuu horseed u yahay?
July 23, 2020 Mahad Jama 1
GAROWE(P-TIMES)- Marka aad si guud u eegto shirka wada tashiga dowladd goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya qodobadii habeenkii xalay ahayd kasoo baxay shirka waxa ay u dhignaayeen kuwo ka turjumaya wada tashi iyo dood dheer oo dhex martay dhinacyada ku shirsan magaalada Dhuusamareeb.
Arinta ugu weyn ee doodu ka taagnayd ayaa ahayd qaabka doorasho ee dalka iyo hanaanka loo mari doono oo ay saluug badan ka muujiyeen dhinacyada siyaasada Soomaalida haba ugu horeeyeen madaxda dowladd goboleedyada oo doonayey doorasho dad-ban in ay ka dhacdo gudaha dalka.
Madaxweynayaasha dowladd goboleedyada qaarkood ayaa ku adkaysanayey ka hor shirka Dhuusamareeb in doorasho dad-ban lagu qabto Soomaaliya halka madaxda dowladda Soomaaliya ay soo jeediyeen in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo Soomaaliya.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aaminsan in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah, waxaana uu madaxda dowladd goboleedyada uu u sheegay in wakhti dheer ay soo wadeen nidaamka doorasho qof iyo cod ah in dalka ay ka dhacdo.
Waxa uu ka sheegay madaxweynuhu soo xidhitaanka shirkii xalay in afar bilood markii ay joogeen xafiiska uu magacaabay gudi ka shaqaysa nidaamka doorasho qof iyo cod ah isla markaasna dowladd goboleedyadu ay gudiyo soo dirsadeen, kuwaas oo soo bandhigay qaabka ay noqon doonto doorashada dambe.
Ka guurida nidaamka doorasho ee Soomaaliya haatan ka jira ayuu madaxweynuhu sheegay in ay muhiim tahay in isbadal lagu sameeyo, waxaana uu madaxda dowladd goboleedyada uu kala garnaqsaday dadaalada uu sameeyey.
Farmaajo ayaa cadeeyey in uusan dan gaar ah ka lahayn nidaamka doorasho ee dalka, isagoona sheegay in wax walba oo suurta galin kara qorshahaasi ay samayn doonaan.
Saciid Denni iyo Axmed Madoobe oo si adag u diidanaa doorashada ayaa haatan aqbalay sida ay u muuqato, waxaana labadoodaba loo sameeyey balanqaad iyo mashaariiic kala duwan oo laga fulinayo deegaanadooda.
Siyaasada dalka iyo isbadalada haatan hana qaaday ayaa u muuqda kuwo isku soo dhowaansho abuuri kara, waxaana socda kulamo kale oo Dhuusamareeb ka socda su looga wada arinsado xaalada Soomaaliya.
Rajada kaliya ee muuqata ayaa ah isku soo dhowaansho iyo horumar laga sameeyo dhinacyo badan, kuwaas oo ay bulshada Soomaaliyeed u arkaan wanaag soo kordhay.
Maya. Maya. Maya.
Waxaa loo kala tagay in qolo walbo midiyaheeda iyo waramadeeda soo afeesato.
Farmaajo ma guuleysan laakiin waxuu ka bad baaday shirqoolkii loo dhigay. Waxaana bad baadiya labo qof oo loo maleynaayay in eey ka soo horjeedeen oo la ogaaday in eey hoosta hashiis ka ahaayeen oo kala ah Khayre iyo Qoor Qoor.
Wasaaradda arrimaha P/land oo barnaamij looga hortagayo cudurka Coronavirus ka daah furtay Garowe
SAWIRRO: Axmed Karaash oo dib ugu soo laabtay Garoowe, kaddib saacado dood
XOG: Al-Shabaab oo loo dusiyay Xog ay hayeen Masuuliyiinta G. Mudug ee PL & shaki soo kala…
Galmudug oo ku dhawaaqday dagaal cusub & Ciidamadii ugu badnaa oo la isku keenay